Ụbọchị: 3 August 2019
A na-eme Cyzọ Mgbapụ na Sakarya dịka ụkpụrụ ahụ si dị
N'ime ọrụ nke Sakarya Metropolitan nke obodo dum rụrụ, emere ngụkọta kilomita nke 10 kilomita n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ahụ. N'ọnọdụ a, eserese ndị ahụ na-arụ n'okporo ụzọ 800 dị na Eski Kazımpaşa Street rụchara. Ngalaba Transportgbọ njem Obodo [More ...]
KARDEMİR nwere onwe ya ndekọ Egal, Turkey si oké eriri igwe na-emepụta
The dịgasị iche iche nke ngwaahịa na mmepụta ike na-enwekwu na onye ọ bụla na-agafe n'ụbọchị KARDEMİR, taa ẹkenịmde ya oké coils ígwè mmepụta ke Turkey maka oge mbụ 56 mm n'obosara. A na-eke ihe mkpuchi siri ike ruo dayameta 52 mm na nkeji mbụ nke afọ [More ...]
30 traingbọ okporo ígwè mbụ bujuru ebupụ banyere Kocaeli DP World Yarımca Port na Tuesday na ntinye aka nke Cahit Turhan, Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa. The mbụ ime ihe nke a oru ngo ohuru ewusi Turkey si njem akụrụngwa Medlog lọjistik [More ...]
Taa na History 3 August Ọ bụrụ na ị kwadoro usoro usoro elekere okporo ụzọ 1948 site na mkpebi nke Council of Ministers of 23054 ugbu a, okporo ụzọ awara. A ghaghi imeputa ụzọ iji kwado ma kwado okporo uzo ugbo ala, ma site n'enyemaka nke Marshall, e leghaara okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè anya.